Lioka 9 - Ny Baiboly
Lioka toko 9
Ny nanirahan'i Jesoa ny Apostoly - Ny fisalasalan'i Heroda - Ny nampitomboan'i Jesoa ny mofo dimy - Ny nieken'i Piera an'i Jesoa ho Kristy - Ny niovan'i Jesoa tarehy - Ny Samaritana tsy nandray an'i Jesoa.
1Ary namory ny Apostoly roa ambin'ny folo lahy Jesoa ka nanome azy hery sy fahefana handroaka ny demony rehetra sy hanasitrana ny aretina. 2Ary naniraka azy hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hanasitrana ny marary. 3Dia hoy izy taminy: Aza mitondra na inona na inona any amin'izay halehanareo any, na tehina, na kitapo, na mofo, na vola, ary aza mitondra akanjo roa. 4Ary na aiza na aiza trano hidiranareo, dia itoero mandra-pialanareo amin'izany tanàna izany. 5Ary raha misy mandà tsy handray anareo, dia mialà amin'izany tanàna izany, ka na ny vovoka amin'ny tongotrareo aza dia ahintsano mba ho fiampangana azy ireo. 6Dia nandeha nitety vohitra ny mpianatra, ka nitory ny Evanjely sy nanasitrana hatraiza hatraiza.
7Ary Heroda tetrarka nandre izay rehetra nataon'i Jesoa ka tsy hitany be ihany izay hevitra, fa ny sasany nanao hoe: 8Joany no nitsangana tamin'ny maty; ny sasany nilaza hoe: Elia no niseho; ary ny sasany nanao hoe: Ny anankiray tamin'ny mpaminany taloha no efa nitsangana tamin'ny maty. 9Dia hoy kosa Heroda: Raha ny amin'i Joany, dia efa nasaiko notapahin-doha izy, ka iza indray àry izao olona reko manao zava-dehibe izao? Dia naniry hahita azy izy.
10Ary rahefa niverina ny Apostoly ka nilaza tamin'i Jesoa ny nataony rehetra, dia nentiny hitokana tany amin'ny tany mangingina akaikin'i Betsaida izy ireo. 11Nony nahare izany ny vahoaka dia nanaraka azy. Noraisin'i Jesoa tsara izy ireo, notorotoroany ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, sady nositraniny ny marary. 12Efa ho hariva ny andro ka nanatona ny roa ambin'ny folo lahy nanao taminy hoe: Ravao ny vahoaka handeha hitady fandriana sy hanina any amin'ny vohitra sy ny saha manodidina, fa atý an'efitra isika izao. 13Fa hoy izy taminy: Omeonareo hanina izy. Dia namaly ireo nanao hoe: Tsy manana afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa izahay, raha tsy hoe handeha hividy angaha izahay mba hisy ho hanin'ireo vahoaka ireo. 14Fa tokony ho dimy arivo lahy izy ireo. Dia hoy izy tamin'ny mpianany: Asaovy mipetraka mitsitokotoko dimam-polo avy ny olona. 15Dia nataony izany, ka nasainy nipetraka daholo izy ireo. 16Tamin'izay noraisin'i Jesoa ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra izy ka nitsodrano azy, ary novakiny sy nozarainy tamin'ny mpianany, mba harosony eny anoloan'ny vahoaka. 17Dia nihinana izy rehetra ka voky; ary nentina ny sombintsombiny sisa tsy lany ka nahafeno sobika roa ambin'ny folo.
18Indray andro, raha nivavaka tany amin'ny toerana mangingina izy ka teo aminy koa ny mpianany, dia nanontany azy ireo izy nanao hoe: Ataon'ny vahoaka ho iza moa aho? 19Ary namaly ireo ka nanao hoe: Ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany milaza hoe Elia, ary ny sasany manao hoe: ny anankiray amin'ny mpaminany taloha no nitsangana tamin'ny maty. 20Fa hianareo kosa, hoy izy, mba manao ahy ho iza? Dia namaly Piera ka nanao hoe: Ny Kristin'Andriamanitra. 21Nefa norarany mafy izy ireo mba tsy hilazalaza izany amin'olona, 22sady nampiany hoe: Tsy maintsy hijaly mafy ny Zanak'olona, ka harian'ny loholona sy ny lehiben'ny mpisorona mbamin'ny mpanora-dalàna ary hovonoiny; fa hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo.
23Ary hoy koa izy tamin'ny olona rehetra: Raha misy ta-hanaraka ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany isan'andro ka hanaraka ahy. 24Izay ta-hamonjy ny ainy dia hahavery azy, fa izay hahafoy ny ainy noho ny amiko no hahavonjy azy. 25Ary inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza izy, nefa very ny tenany ka voaheloka izy? 26Fa izay menatra ahy sy ny teniko, ho menatra azy koa ny Zanak'olona raha avy amin'ny voninahiny sy ny an'ny Rainy, ary ny an'ny anjely masina. 27Izaho milaza marina aminareo fa ny sasany amin'izay eto dia tsy hanandrana ny fahafatesana, raha tsy efa mahita ny fanjakan'Andriamanitra.
28Rahefa tokony ho havaloana taorian'ny nilazany an'izany, dia nitondra an'i Piera sy Jakoba ary Joany izy ka niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka. 29Raha mbola nivavaka izy, dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany. 30Ary indro nisy roa lahy niresaka taminy, dia Moizy sy Elia, 31izay niseho tamim-boninahitra sy nilaza ny hahalasanany izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerosalema. 32Navesatry ny tory ny mason'i Piera sy ny namany, nefa nahari-tory ihany izy, dia nahita ny voninahitr'i Jesoa mbamin'izy roalahy teo aminy. 33Ary tamin'izy roa lahy nihataka, dia hoy Piera tamin'i Jesoa: Ry Mpampianatra ô, mahafinaritra ny mitoetra atý, ka andeha hanangana lay telo eto, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy, ary ny iray ho an'i Elia; tsy fantany anefa izay nolazainy. 34Raha mbola niteny izany izy, dia nisy rahona nanarona azy ireo, ka natahotra izy telolahy tamin'ny nidirany tao anatin'ny rahona. 35Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe: Ity no Zanako malalako, henoy izy. 36Ilay niteny iny ny feo, dia Jesoa irery ihany no hita. Ary nangina ireo mpianany ka tsy nilazalaza na tamin'iza na tamin'iza tamin'izany andro izany izay zavatra hitany teo.
37Nony ampitso, raha nidina avy tany an-tendrombohitra izy ireo, dia notsenain'ny vahoaka be Jesoa. 38Dia nisy lehilahy anankiray tao amin'ny vahoaka niantso hoe: Ry Mpampianatra ô, mihanta aminao aho, mba iantrao lahy ny zanako, dia ny zanako lahy tokana, 39fa azon'ny fanahy ratsy izy, ka vantany vao tongany dia midradradradra sady akapokapony mafy dia mafy ataony mandoa vory, ary tsy avelany raha tsy efa torovana erý. 40Nangataka tamin'ny mpianatrao aho mba handroaka azy, fa tsy nahafaka izy ireo. 41Ary namaly Jesoa ka nanao hoe: Ry taranaka tsy mino sady ratsy fanahy, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo sy handeferako aminareo? Ento àry ny zanakao. 42Nony nanatona ilay zaza, dia nazeran'ny demony ka nakapony izaitsizy; 43fa norahonan'i Jesoa ny fanahy maloto, dia nositraniny ilay zazalahy ka nomeny an-drainy. 44Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben'Andriamanitra.
Ilay mbola gaga tamin'izay rehetra nataon'i Jesoa iny izy rehetra, dia hoy izy tamin'ny mpianany: Alatsaho tsara ao amin'ny sofinareo izao rehetra izao, satria tsy maintsy hatolotra ao am-pelatanan'ny olona ny Zanak'olona. 45Fa tsy azon'izy ireo izany teny izany, fa takona taminy ka tsy fantany, sady tsy sahy nanontany azy ny amin'izany izy.
46Ary nisy hevitra tonga tao an-tsain'ireo, dia ny amin'izay lehibe aminy. 47Fantatr'i Jesoa ny hevitra tao am-pony, ka naka zaza kely anankiray izy napetrany teo anilany, 48dia hoy izy tamin'izy ireo: Na iza na iza mandray itony zazakely itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary na zovy na zovy mandray ahy dia mandray ilay naniraka ahy; fa izay kely indrindra eo aminareo rehetra dia izy no lehibe. 49Dia niteny Joany nanao hoe: Ry Mpampianatra ô, nahita olona anankiray nandroaka demony tamin'ny anaranao izahay, ka noraranay, satria tsy namantsika izy; 50fa hoy Jesoa taminy: Aza raràna, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo.
51Ary nony efa antomotra ny andro tsy maintsy hanalana azy, dia nanapa-kevitra hankany Jerosalema izy, 52ka nandefa iraka nialoha azy. Dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny tanàna anankiray tany amin'ny Samaritana, mba hanomana ny fandraisana azy; 53fa tsy nisy nandray azy ny olona, satria olona hankany Jerosalema no fijeriny azy. 54Nony nahita izany Jakoba sy Joany mpianany dia nanao hoe: Tompoko, tianao va raha asainay ilatsahan'ny afo avy any an-danitra izy handevona azy? 55Fa nitodika izy ka nananatra azy mafy hoe: Tsy fantatrareo mantsy izay tokony ho fanahinareo. 56Ny Zanak'olona anie tsy tonga hamery olona fa hamonjy azy. Dia nankany amin'ny vohitra hafa izy ireo.
57Raha mbola teny an-dàlana izy ireo, dia nisy olona anankiray nilaza taminy hoe: Hanaraka anao aho, na aiza na aiza halehanao. 58Fa hoy Jesoa taminy: Ny amboadia manan-davaka, ary ny voro-manidina manana akany; fa ny Zanak'olona tsy mba manana izay hampandriany ny lohany. 59Ary hoy izy tamin'ny anankiray hafa: Manaraha ahy. Dia izao no navalin'io: Aoka aloha, Tompoko, handevina ny raiko aho. 60Fa hoy Jesoa taminy : Avelao ny maty handevina ny maty ao aminy, fa hianao kosa mandehana mitory ny fanjakan'Andriamanitra. 61Dia nisy iray hafa koa nanao taminy hoe: Hanaraka anao aho, Tompoko, fa aoka aloha hanao veloma ny ao an-tranoko aho. 62Fa hoy Jesoa taminy: Rahefa mety ho mpitana angadin'omby miherika, dia tsy sahaza ny fanjakan'Andriamanitra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1034 seconds